Penguin 2.0 Sida Loogu Joogto Dhinaca Wanaagsan ee Google | Martech Zone
Penguin 2.0 Sida Loogu Joogto Dhinaca Wanaagsan ee Google
Arbacada, Juun 19, 2013 Arbacada, Juun 19, 2013 Kelsey Cox
Muddo bil ka yar ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay ee Google ay cusbooneysiinta raadinta bilowday, in kasta oo tiknoolajiyadda cusub ee la dagaallanta ee Penguin 2.0 aan weli si buuxda loo hirgelin, haddana waxay haddaba keenaysaa xoogaa walaac ah.
Suuqgeeyayaasha mawduucyadu uma baahna inay quustaan ​​illaa inta ay qorsheynayaan inay ku sii sugnaadaan dhinaca nabdoon ee Google. Sida laga soo xigtay xogta lagu soo ururiyey Suuqa'infographic ugu dambeeyay', Google Waxay Iibsatay Beer Xayawaan, taasi waxay ka dhigan tahay ka-haynta farsamooyinka SEO-ga ee hoosta laga xarriiqay sida isku-dirista isku-dirista, dib-u-habeynta sirta ah ama dharka, iyo ku-tiirsanaanta kaliya qiimaha sare, xeeladaha koofiyadaha cad.
Gaar ahaan, websaydhyada diiradda saaraya soo saarista waxyaabo ku habboon oo gaar ah, iyada oo la hubinayo habboonaanta bogga, dib-u-celinta kalsoonida leh iyo calaamadaha xooggan ee bulshada ayaan u badnayn inay dareemaan kuleylka Penguin 2.0. Waxyaabaha sida isdaba jooga ah loo cusbooneysiiyey, waqtiga deg deg deg deg deg deg ah iyo isku xirnaanta lagu kalsoonaan karo ee ka socda websaydhada sumcadda leh ayaa sidoo kale ah siyaabo lagu hubiyo saamaynta ugu yar.
Waa tan muuqaalka dhammaystiran ee waxa Google ku kaydsan:
Tags: Content Suuqgoogle +marketingqalin 2.0
Ku-tiirsanaanta Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Inbound